GERISS - Slides & Hinges matihanina
Ny rafitra rindrina boaty matevina misy rindrina dia ampiasaina matetika ho an'ny lalimoara an-dakozia sy fidiovana. Ity karazana rafitra boatin-boaty kely ity dia mampiasa sary mihetsika malemilemy tsy misy fotony miaraka amin'ireo fitaovana fanidiana. Azonao atao ihany koa ny miova hampiasa tsindry hanokatra sary mihetsika miafina miafina amin'ny sarimihetsika eo aloha. Ny mampiavaka ity vokatra ity dia ny slide drawer ambanin'ny tany izay azo ampiasaina amin'ny vatasarihana vy sy vatasarihana hazo. Afaka mamonjy ny vidin'ny lisitra ho anao.
MANarahaba anao HERWS GERISS
Famokarana fitaovana fanaka matihanina hatramin'ny 1999.
Vita vy tsy miova vy BBQ lafaoro turnpit / ...
Famaritana: Anaran'ny vokatra: S ...
Famaritana: Anaran'ny vokatra: ...
Sarona nafenina ny kabinetra vita amin'ny clip
86mm haavo vatosoa lafiny tontonana solika boaty vy d ...
Vatasarihana mahitsy 150mm mihetsiketsika ao an-dakozia ...
Famaritana: karazana: 150mm he ...
Famaritana: karazana: 118mm ahy ...
Mangina malefaka rafitra mihetsika akaiky ho roa heny ...
Famaritana: karazana: Silent s ...
Famaritana: karazana: Double w ...
Famaritana: karazana: 48mm tel ...
45mm fanitarana feno malefaka famaranana baolina mitondra d ...
Famaritana: karazana: 45mm feno ...
Fantsom-pifandraisana telestopika feno 45mm feno ...
w45 feno extention malefaka famaranana baolina mitondra dr ...
Famaritana: karazana: w45 feno ...
45mm feno vatasarihana vatasarihana vatasarihana slid ...
Famaritana: karazana: 45mm Ful ...
Fantsona teleskopika fanitarana feno 45mm baolina bea ...
Famaritana: karazana: ext feno ...
37mm Fantsona telesopika feno / telo heny b ...
Famaritana: karazana: 37mm Ful ...
17mm Single extension extension mount telescopic dra ...
Famaritana: karazana: 17mm ota ...
Ny orinasanay SHANGHAI YANGLI FURNITURE MATERIAL CO., LTD natsangana tamin'ny taona 1999, dia mifantoka amin'ny fampivoarana sy ny famokarana fitaovana enti-miasa amin'ny fanaka. Izahay izao dia miasa ivon-toerana R&D roa sy ny toetoetran'ny toby famokarana zavakanto any Shanghai sy Zhongshan, faritanin'i Guangdong. Ny vokatray dia amidy amina marika roa malaza: YANGLI sy Geriss. Izy ireo dia rafitra vatasarihana, sary miafina, sary mihetsika Ball, hinge miafina, tahony, savily fatana ary kojakojam-pitaovana fanaka hafa, izay ampiasaina amin'ny fanaka, lalimoara, fitaovana ao an-trano ary finday. Ny vokatray dia nahazo laza teo amin'ireo firenena 40 mihoatra an'izao tontolo izao.